Boqore “Shareecada Islaamka waxaan u hirgelin doona siduu Alle u soo dajiyay, AMISOM way baxayaan” | WAAJID
« Gudoomiye Kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka oo safarikii u horeeyay ku yimid Magaalada Muqdisho, tan iyo markii Baarlamaanka la ballaariyay
War Deg Deg ah: Bam Xalay lagu weeraray guriga madaxa hay’adda Save The Children ee Gobolka Hiiraan »
This entry was posted on April 29, 2009 at 1:47 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
One Response to “Boqore “Shareecada Islaamka waxaan u hirgelin doona siduu Alle u soo dajiyay, AMISOM way baxayaan””
Mire Says:	April 29, 2009 at 4:49 pm | Reply Waad salaaman tihiin giddigiin!
Walaaleyaal, adinkoo mudan..
Walaaleyaal ma jirto wax la yiraahdo diin Islaan ee waa wax dadka danyarta ah oo aqoonta guud ee dunida maanta ah saboolka ka ah ee ay Carabtu u sameysatay inay dadkeeda (oo markaas kala daadsanaa) isugu keento hal fikrad oo isla iyaga u shaqeysa.
Runtii, diin-ku-sheeggaani waa mid ibtilo u horseedday dadkeena oo kunkii sano ee la soo dhaafay dhagaxa madow ee Sucuudiga ku yaal ay u sujuudayeen. Sucuudigu waa dalka sida ugu fooxashun ula dhaqma dadka an Carabta aheyn, waliba kuwa Carabta ah ayey quursadaan, iska illow Soomaali iyo kuwo kale oo madmadoow. Sucuudigu wuxuu diiday in dad Soomaaliyeed oo tabaaleysan uu dalkiisa ku saacido, wuxuu diiday in dad Soomaaliyeed oo dalkiisa ku geeriyooday lugu aaso ciiddiisa – ciidda ay u tukan jireen kun sannadood. Adduunyooy xaalkaa ba’!
Anigu waxaan diintaan ka tagey oo an isaga baxay markaan muddo dheer si cilmiyeysan iyo si kaleba ugu kuurgalay. Waxaan ogaaday in duldulleelo badan oo dadkeenna iyo dalkeenna ka muuqda iyadu sal u tahay. Ha oran”diinta maahee waa dadka oo si xun u fahmay!” Diintaan dadku wadankooda uga cararayeen oo ay dhul gaalo ammaan bideen, oo adduunka oo dham khaati ka taagan yahay, iyadu miyeysan yeelan karin wax dhaliil ah? Ma ildho la’aan iska soco ayey arrintu tahay?
Dhaqankeenii waa la beddelay, afkeenni, magaceennii…
Bal eega adibna!